Kedu ka “Pet a Osisi” Atụmatụ Mgbanwe Ihu Igwe ga -esi enyere ndị njem nlegharị anya Uganda aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Kedu ka “Pet a Osisi” Atụmatụ Mgbanwe Ihu Igwe ga -esi enyere ndị njem nlegharị anya Uganda aka
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Njem nlegharị anya "Pet a Tree" na Uganda
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya, Honorable Martin Mugarra Bahinduka bidoro atụmatụ "Pet a Osisi" na Uganda, atụmatụ nke ụlọ ọrụ na-abụghị gọọmentị Africa Tourism na Environment Initiatives na August 5, 2021, na Uganda Education Education Wildlife. (UWEC) na Entebbe.
Mgbe ọ na -amalite atụmatụ a, Minista kwere nkwa ịkwado nzukọ a n'ụzọ zuru oke.
Ọrụ a dabara kpọmkwem na atụmatụ mmepe obodo Uganda nke mkpọsa osisi nde iri anọ.
Onye ozi ahụ kọwara nke ọma na mmekọrịta dị n'etiti njem nlegharị anya na gburugburu ebe obibi dabere na anụ ọhịa nke chọrọ ka osisi dị ndụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịchekwa osisi ndị dịla mgbe a na -akụkwu ihe.
Gburugburu, site n'ọdịdị ya, ọdịbendị-akụkọ ihe mere eme, ike ihu igwe nke ọha, na-anọchite anya mkpali njem ndị njem, ebe gburugburu na-adịghị ọcha na enweghị mgbanwe enweghị ike ịdị na-enweghị ime njem nlegharị anya gburugburu ebe obibi.
Onye isi obodo nke Uganda World Wildlife Fund (WWF), Maazị David Dduli, kelere ndị guzobere "Pet a Osisi" maka ịmụpụta ụzọ dị oke mma dị otú a, ma nyekwa nkwado nke nzukọ ahụ na mmegharị ebumnuche ya na mweghachi osisi. “Ọ dị mkpa ịkpọkọta ndị ntorobịa isonye na atụmatụ a. Aha anụ ụlọ abụwo akụkụ nke ọdịnala Afrịka oge niile, ọ na -emepụtakwa mgbakwunye. Ka anyị jiri 'Pet a Tree' weghachite omume anụ ụlọ, "Duli kwuru. "Anyị na -eguzo na ohere nna nna anyị hà nwere ma tufuo, ọ bụkwa ugbu a bụ ohere anyị ime ya maka ọgbọ ndị na -abịa n'ihu."
Onye isi oche atụmatụ njem nlegharị anya na gburugburu Africa, onye bụkwa onye isi oche nke ndị nwe ụlọ nkwari akụ Uganda, Oriakụ Susan Muhwezi, kelere National Forestry Authority (NFA), WWF, UWEC, na Ministry of Tourism. Anụ ọhịa na Antiquities maka ịkwado ụdịrị atụmatụ a dị ịtụnanya nke gbadoro anya na iweghachi ihe dị ndụ. O kwuru maka etu o siri na -akwado ụdịrị atụmatụ a n'otu aka ya na ọ ga -aga n'ihu na -eme ya. Oriakụ Muhwezi gbara ndị gọọmentị na ndị mmekọ mmepe aka ka ha na -akwado nkwado ndị ntorobịa na -emepe emepe obodo.
Onye isi ụlọ ọrụ UWEC, Dọkịnta James Musinguzi, dụrụ ndị Uganda ọdụ ka ha mee ka ọ bụrụ ụkpụrụ ịkụ osisi n'oge pụrụ iche dịka agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ na ihe ndị ọzọ. ikekwe na nke mbụ n'ime akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. Anyị kwesịrị ikweta ihe ịma aka dị n'okpuru mgbanwe ihu igwe. ”
Onye minista na -ahụ maka gburugburu ebe obibi, Honorable Beatrice Anywar, bụ onye nọchitere anya Stuart Maniraguha, onye na -ahụ maka ihe ọkụkụ na NFA, onye kwusiri ike na ọ dị mkpa ịkụ ala opekata mpe hekta 124 kwa afọ na ebumnuche iji weghachite mkpuchi ọhịa furu efu. O kwuru na n'ime afọ iri atọ, ọnụ ọgụgụ ndị osisi belatara site na 30% ruo 24% mana ọ na-ekwu na enwere ụdị olileanya ugbu a na ụdị atụmatụ a. Mmetụta a na -enwe mmetụta site na mmụba ruru oke ọhịa 8%, o kwekwara nkwa nkwado NFA maka mkpọsa “Pet a Tree”. Ọ gara n'ihu rịọ maka mmata na ntinye ọhụrụ nke ndị Uganda na nzukọ ọ bụla isonye na mgbasa ozi mgbanwe ihu igwe na mmegharị nke iji weghachite okike.
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Tooro, Joan Else Kantu, n'aha nke ala ahụ nyere ala hekta ise "Pet a Tree" iji kụọ oke ọhịa na Tooro site na iji aha Tooro. “Anyị na -ege mkpu akwa. Ọhịa a bụ iji hụ na ụmụ ụmụ anyị nwere ekele maka ihe dị ndụ dị ka ọ masịrị anyị. ”
Amumpaire Moses Bismac, onye guzobere "Pet a Tree" na Africa Tourism and Environment Initiatives, kwupụtara ekele maka ụlọ ọrụ gọọmentị WWF, National Forestry Authority, Uganda Education Education Wildlife, na Uganda Wildlife Authority maka ịkwado mkpọsa "Pet a Tree". Ọ kpọkuru ndị nta akụkọ ibe ya na ndị Uganda niile ka ọ dịkarịa ala nwee otu osisi Pet. "N'ụzọ pụrụ iche, enwere m ekele maka nkwado nke WWF na atụmatụ gburugburu ya na nkwado maka mkpọsa 'Pet a Tree'."
Na Uganda, alaeze Bunyoro-Kitara, otu n'ime ụlọ ọrụ ọdịbendị nke mba ahụ mebere ịtọ mkpụrụ osisi karịa okpu okpu na olili na atụmatụ nke Omukama (Eze) Solomon Gafabusa Iguru nke Mbụ iji megharia alaeze ahụ, omume nke gbanyere mkpọrọgwụ n'ime afọ ole na ole gara aga.